Xorriyad-hadal iyo Xaqa muwaadinka:
Wednesday 9th October 2019 12:41:40 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
Dhawr sanno ka hor ayaa wefti Madaxweynihii hore ee JSL Md. Axmed M. Maxamuud (Siilaanyo) uu hoggaaminayaa safar dibadeed u baxay. Warar badan oo
safarkaa iyo ciddii uu la kulmay la xidhiidha ayaa warbaahintu baahisay. Ereyada qaarkood ay warbaahinta iyo masuuliyiintii dawladduba ku celcelinayeen baan u arkay inaanay ahayn kuwo dadka war looga dhig, sida "Roog cas baa lagu soo dhaweeyay!" Hassan Madar oo masuuliyiinta xukuumadda ahaa wakhtigaa, ayaan waydiiyay sababta hadallada qaarkood oo buunbuunin iila muuqday u adeegsanayso xukuumaddu! Wuxuu si deggan ii yidhi hadal dulucdiisu ahayd; Wararka intaad ku leedihiin (Shacab ahaan) uun ka qaata oo wararka aan la idiinku talogelin ha isku mashquulinina! Hadalkaasi waan ka garaabay oo macquul buu iigu muuqday.
La-xisaabtanku furan oo waliba si adag in loola xisaabtamo laamaha dawladda oo dhan, waliba xogta iyo wararka in wax laga waydiiyo, waxna la iska waydiiyo. Waa xaq dastuuri ah. Waxyaabaha aan marna garowshiyaha lahayn ee masuuliyiinta qaarkood ku kacaan oo xorriyaadka muwaadinka taabanaya ayaa iyana jira. Sida ku xusan Xeerka Saxaafadda JSL ee X Lr 27/2004, Dastuurka Qaranka qodobkiisa 32aad iyo kuwo badan oo kale, muwaadinku xaq buu u leeyahay xorriyad-hadalka iyo xaqa war helista, waxaanan u arkaa kuwo aan baryo iyo hebel ku-tagri-fala aan lagu aqbali karin. Waxa iyana in lala akhriyo u baahan qodobka 24aad, faqradda 4aad ee Dastuurka laftiisa oo tilmaamaya in ra'yi-dhiibashadu aanay xadhkaha goosan ee loo meel-dayo! Yaynaan qodobbada dastuurka qaarna ku eeran, qaarna eersan.
Ninkaa Ibraahim Khadar baa i xasuusiyay hadalkaa maanta.
[XASAASI:] Sambalooshe Oo Qadiyadda Somaliland Ku Tilmaamay Mid Xaqa Iyo Xal Uu Soo Jeediyey
"Diinta keliya ee xaqa ah Ilaahayna ogol yahay waa islaamka" Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir.
"Waxaanu Ka Aradanahay Dastuurkayagii Aanu Barashadiisa Xaqa U Lahayn" [Shacabka Hargaysa]
[Muxaadaro:-] Xaqa ay muslimiintu isku leeyihiin iyo qeybtii koobaad soo jeedintii sh isxaaq sh mura
Wasiir Guri-barwaaqo oo Joojiyey Barnaamij Suugaaneedyadii Ciidal Adxa ee Telefishanka Qaranka,Shaqaalaha oo Lagala aamu
Sababta Gobalka Sool Aanu U Helin Saamigii Uu Xaqa Ugu Lahaa Wakiillada Iyo Cali Khaliif Oo Lahaa Fikirka Lagu Saleeyey
[WAR DEG DEG AH] Siyaasi Toos Ula Hadlay Madaxweyne Biixi Una Sheegay Inaan Beeshoodu Helin Saamigii Ay Xaqa Ugu Lahayd